Ungayisombulula njani ingxaki yokuPhuka kwePhepha xa uprinta kwi-Excel 2016
Indawo yokuqhekezwa kwephepha kwi-Excel 2016 ikwenza ukuba ubone kwaye ulungise iingxaki zekhefu kwangoko, njengaxa inkqubo ifuna ukwahlula ulwazi kumaphepha ahlukeneyo owaziyo ukuba kufuneka abe kwiphepha elinye.
Eli nani libonisa iphepha ekuKhangekeni kokuQhekeka kwePhepha kunye nomzekelo wekhefu elibi elithe nkqo onokuthi ulilungise ngokulungisa indawo yokuqhekeka kwephepha kwiphepha le-1 nakwiphepha lesi-3. Ngokunikwa ubungakanani bephepha, ukuqhelaniswa, kunye noseto lwemida yale ngxelo , I-Excel yophula iphepha phakathi kweekholamu K noL. Olu qhekeko lwahlula ikholamu Ehlawulelweyo (L) kubo bonke abanye kuluhlu lwabathengi, lubeka ngokufanelekileyo olu lwazi kwiphepha lalo le-3 kunye nephepha 4 (aliboniswanga).
Jonga kwangaphambili ukwaphuka kwiphepha ngengxelo yokuQhekezwa kwephepha.
Ukuthintela idatha kwikholamu ehlawulelweyo ekushicileleni kumaphepha ayo, kuya kufuneka ususe ikhefu lekhasi kwikholamu esekhohlo. Kule meko, ndihambise ikhefu lephepha phakathi kweekholamu G (kunye ne-zip-khowudi yedatha) kunye no-H (equkethe ulwazi lobume beakhawunti) ukuze igama kunye nolwazi lwedilesi luhlale kunye kwiphepha 1 nakwiphepha 2 kunye nenye idatha yomthengi eprintwe kunye kwiPhepha 3 nakwiPhepha 4.
Iphepha 1 lengxelo emva kokuhlengahlengisa ukwaphuka kwephepha kwiphepha lokujonga iphepha lokujonga kwangaphambili.
Eli nani libonisa ikhefu lephepha elime nkqo kwiphepha lokujonga iphepha lokujonga iphepha, onokulifeza ngokulandela la manyathelo:
Cofa iqhosha lokuQhawula iphepha (lesithathu kwiklasta ngasekhohlo kwe-Zoom slider) kwi-bar ye-Status, okanye ucofe Jonga Jonga ukuQhekeka kwephepha kwiRibhoni okanye ucofe i-Alt + WI.
Oku kukusa kwiphepha lokujonga iphepha lokujonga iphepha lokuqala elibonisa idatha yakho kwiphepha lokuncipha (iipesenti ezingama-60 eziqhelekileyo kumfanekiso) kunye neenombolo zephepha eziboniswe ngohlobo olukhulu lokukhanya kunye nekhefu lekhasi eliboniswe yimigca enzima phakathi kweekholamu kunye nemiqolo kwiphepha lokusebenzela.
Ngethuba lokuqala ukhetha lo myalelo, i-Excel ibonisa uMamkeli kwibhokisi yencoko yababini yokuQhekeka kwePhepha. Ukuthintela le bhokisi yencoko yababini ukuvela kwakhona ngalo lonke ixesha usebenzisa iMboniselo yokuQhekeka kwePhepha, cofa kwindawo ethi Musa ukubonisa le Ncoko yababini kwakhona phambi kokuba uvale ibhokisi yencoko yokwamkela.
Cofa u-OK okanye ucofe u-Enter ukuze ulahle ibhokisi yencoko yababini yokwamkela ukuQhekeka kwePhepha lokujonga kuqala.
Beka isikhombisi semouse kwenye indawo kwisalathiso sekhefu (enye yemigca enzima ejikeleze ukumelwa kwephepha) ekufuneka ulungelelanisile; xa isikhombisi sitshintsha kwitolo enentloko ephindwe kabini, tsala isalathiso sephepha kwikholamu oyifunayo okanye kumqolo kwaye ukhulule iqhosha le mouse.
Umzekelo obonisiweyo, isalathiso sekhefu satsalwa phakathi kwePhepha 1 nelePhepha 3 ngasekhohlo ukuze phakathi kweekholamu G noH. nephepha 2. Eli phepha litsha lekhefu emva koko libangela ukuba zonke ezinye iikholamu zedatha yabathengi zishicilele kunye kwiPhepha lesi-3 nakwiphepha lesi-4.
Emva kokuba ugqibile uhlengahlengiso lokuphuka kwephepha kwiPhepha lokuQhawula iphepha (kwaye, mhlawumbi, uprinte ingxelo), cofa iqhosha eliQhelekileyo (eyokuqala kwiqela kwiqela lasekhohlo leSondeza isilayida) kwibar yeNdawo, okanye ucofe Jonga → Eqhelekileyo kwiRibhoni okanye ucofe u-Alt + WL ukubuyisela iphepha lokusebenzela kwimbonakalo yalo rhoqo yedatha.
Ungafaka elakho ikhefu lesandla kwindawo yesikhombisi seseli ngokunqakraza Faka iphepha eliqhekezayo kwiBreaks imenyu eyehlayo kwithebhu Yobeko Lwephepha (Alt + PBI) kwaye uzisuse ngokunqakraza Susa ukuQhekeka kwephepha kule menyu (Alt + IPBR). Ukususa lonke ulwahlulo lwephepha lesandla olifakileyo kwingxelo, cofa useta kwakhona onke amaPhepha okophuka kwimenyu yokuhla kweqhosha (i-Alt + PBA).
yintoni isiluleko esilungileyo
ukuseta gmail kwimbonakalo
ukongeza njani amakhiwane esig
Iziphumo zexesha elide ze-lisinopril
usiphilisa njani isilonda
ingakanani i-potassium kwii-apile
I-advil kunye ne-motrin efanayo